/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Bevacizumab (216974-75-3)
Rating: SKU: 216974-75-3. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Bevacizumab (CAS 216974-75-3), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mmachi.
Bevacizumab ntụ ntụ a na-ekewa dị ka ọgwụ "monoclonal antibody" na ọgwụ "anti-angiogenesis". A na-enye ọgwụ izizi ihe karịrị nkeji iri itoolu. Oge infusion nwere ike mechaa belata ka ọ bụrụ nkeji iri atọ ma ọ bụrụ na anabataghị ya nke ọma
Bevacizumab isi Characters
Usoro Molecular: C6638H10160N1720O2108S44
Molekụla arọ: 302.41
Melt Point: 61 - 71 Celsius
Nchekwa Nche: 2 - 8 Celsius
Bevacizumab (216974-75-3) iji mee ihe na steroid steroid
Bevacizumab (CAS 216974-75-3), nke a na-akpọ Avastin na Mvasi.
Bevacizumab abia dịka ihe ngwọta iji nye nwayọ nwayọọ nwayọọ n'ime ụbụrụ. Bevacizumab bụ onye dọkịta ma ọ bụ nọọsụ na-edozi na ụlọ ọrụ ahụike, ụlọ infusion, maọbụ ụlọ ọgwụ. A na-enyekarị Bevacizumab otu izu 2 ma ọ bụ 3.
Ọ ga - ewe oge 90 ka ị nweta ntinye mbụ nke bevacizumab. Onye dọkịta ma ọ bụ nọọsụ ga-ele gị anya ka ị hụ otú ahụ gị si emeso Bevacizumab (216974-75-3). Ọ bụrụ na ịnweghị nsogbu dị oke mkpa mgbe ị nwetara ntinye mbụ nke bevacizumab, ọ ga-ewere 30 ka ọ bụrụ 60 nkeji maka ịnata nkwụsị nke fọdụrụ n'ime ọgwụ gị.
Ịṅụ ọgwụ nke Bevacizumab nwere ike ime ka mmeghachi omume dị njọ mgbe ị na-aṅụ ọgwụ. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla n'ime ihe mgbaàmà ndị a, gwa dọkịta gị ozugbo: nsogbu iku ume ma ọ bụ mkpụmkpụ ume, mkpuchi, ịma jijiji, sweating, isi ọwụwa, ịgba aghara, dizziness, ịda mbà n'obi, ịgba aghara, itching, aghara, ma ọ bụ hives. Dọkịta gị nwere ike ọ dị mkpa iji nwayọọ nwayọọ kwụsịlata ihe ị na-eme, ma ọ bụ kwụsị ma ọ bụ kwụsị ọgwụgwọ gị ma ọ bụrụ na ịnweta mmetụta ndị a ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ.
Ịdọ aka ná ntị na Bevacizumab (216974-75-3)
Bevacizumab nwere ike imebi oge mgbatị na-eme ka ọ ghara ịmalite imebi ọmụmụ. Ụfọdụ akụkụ adịghị agbakee kpamkpam, ma ọ bụ weghachi nwayọ nwayọ na-esochi ọgwụ.
Ngwurugwu Monoclonal bụ ụdị ọhụụ ọhụrụ nke usoro ọgwụgwọ kansa "ezubere iche". Ihe na-alụso ọrịa ọgụ bụ akụkụ nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Dị ka ọ dị, ahụ na-emepụta ihe na-alụso ọrịa ọgụ na nzaghachi na antigen (dị ka protein dị na nje) na-abanye n'ahụ. Ihe ndị ahụ na-alụso nje ọgụ ọgụ na-eme ka ihe ndị na-alụso ọrịa ọgụ banye n’ahụ́ iji gosi ya ka e bibie ya. Na laabu, ndị ọkà mmụta sayensị na-enyocha kpọmkwem antigens n'elu mkpụrụ ndụ cancer (ebumnuche) iji chọpụta protein iji kwekọọ na antigen. Mgbe ahụ, site na iji protein ndị mmadụ animaland, ndị sayensị na-arụ ọrụ iji mepụta mgbochi pụrụ iche nke ga-etinye na antigen a chọrọ. Ihe mgbochi ga-etinye aka na antigens dabara dị ka isi dabara na mkpọchi. Nkà na ụzụ a na-enye ohere ọgwụgwọ ịchekwa mkpụrụ ndụ ụfọdụ, na-akpata obere nsị na ahụ ike sel. Enwere ike ịme ọgwụ mgbochi ọrịa monoclonal naanị maka ọrịa cancer na whichantigens (yana usoro nje ahụ).
Bevacizumab (216974-75-3) na-arụ ọrụ site na itinye aka na usoro nke angiogenesis site na icheta ma na-egbochi na-eto eto vastohelial growth (VEGF). VEGF bụ cytokine (obere protein nke sitere na mkpụrụ ndụ ndị nwere mmetụta pụrụ iche na omume nke mkpụrụ ndụ) nke ọ bụrụ na ya na ndị nabata ya n'ime cell na-eduga n'ọhụụ ọbara ọhụụ ma ọ bụ angiogenesis.
Esi zuta Bevacizumab si AASraw